Ezona 8 iinkqubo zewebhu zewebhu zibalaseleyo yeWindows, iMacOS kunye neLinux, i-Emulator.online ▷ 🥇
Unokufumana ezinye iindidi zeenkqubo ze-webcam kwintengiso. Ezinye izicelo zisetyenziselwa ukuvavanya ikhamera yePC kwaye ubone ukuba iyazizisa na izithembiso. Abanye banesindululo esonwabisa ngakumbi kwaye kubandakanya iifilitha kumfanekiso obanjiweyo. Kukwakho nezinye iindlela ezikuvumela ukuba urekhode yonke into ebonisiweyo ukuba iphinde iphinde iphonononge kamva.
Apha ngezantsi kukho iinkqubo ze-webcam eziphambili ze-8 zeWindows, iiMacOS, kunye neLinux. Phuma!
1. Uninzi lweCam
I-ManyCam ibonelela ngemisebenzi eluncedo kwinkomfa yevidiyo okanye ukurekhodwa kwesifundo sevidiyo. Isicelo sikuvumela ukuba ubhale kwaye uzobe kwiscreen, ukongeza imifanekiso kwividiyo, kubandakanya iimilo, phakathi kwabanye. Kuyenzeka ukuba ubeke ngaphezulu umfanekiso wekhamera yewebhu ngeefayile, ubonise isikrini sekhompyuter, okanye nekhamera yeselfowuni.
Umsebenzisi usenokwenza uhlengahlengiso kumbala, ukusondeza, ukutshintsha ukukhanya, kunye nokusebenzisa izihluzi zokuzonwabisa kunye neziphumo. Kukho ukhetho lokusasaza ngqo kumaqonga awahlukeneyo anjengeYouTube, iTwitch kunye neFacebook. Okanye, ukuba ukhetha, gcina umxholo ukuya kuthi ga kwi-720p kwinguqulelo yasimahla kunye ne-4K kuhlobo oluhlawulelweyo.
Ividiyo inokugcinwa kwiifomathi ezithandwayo njengeMP4, MKV, MOV, kunye neFLV.
ManyCam (simahla, kunye neenketho zezicwangciso ezihlawulelweyo ezineempawu ezininzi kwaye akukho watermark): Windows 10, 8 no-7 | MacOS 10.11 okanye ngaphezulu
I-YouCam yinkqubo ebonelela ngezixhobo zomsebenzi kunye nokudlala. Iyahambelana neenkonzo ezahlukeneyo zokufowuna ividiyo kunye namaqonga evidiyo aphilayo, ineefilitha zokuhombisa zexesha lokwenyani. Ungasathethi ke ngekhulu leziphumo ezingathandabuzekiyo.
Ngokuphathelele kwintetho, umsebenzisi unezixhobo zokuthatha amanqaku, ayinyuse ividiyo kunye nemifanekiso, abelane ngescreen, phakathi kwabanye. I-interface yayo enobuntu ikuvumela ukuba ufumane ezona zinto ziphambili ngokulula.
Ukuba ukhetha ukurekhoda, ividiyo inokugcinwa kwizisombululo ezahlukeneyo, kubandakanya i-HD epheleleyo, kwiifomathi ze-AVI, iWMV, kunye ne-MP4.
YouCam (kuhlawulwe, kuvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30): Windows 10, 8, no-7
3. Uvavanyo lwekhamera yewebhu
Uvavanyo lwekhamera yewebhu sisicelo esikwi-intanethi esikuvumela ukuba uvavanye imisebenzi enikezelwa yikhamera yePC yakho ngendlela elula. Ngenisa ngokulula iwebhusayithi kwaye ungene kwiqhosha Cofa apha ukuvumela ukufikelela kwizichongi zekhamera yewebhu. Emva koko uye ku Zama ikhamera yam. Uvavanyo lungathatha imizuzu embalwa.
Kuyenzeka ukuba wazi idatha enje ngesisombululo, inqanaba lesuntswana, inani lemibala, ukuqaqamba, ukuqaqamba, phakathi kwabanye. Ukongeza kuvavanyo ngokubanzi, umsebenzisi unokuvavanya ngakumbi imiba ethile enjengokusonjululwa, inqanaba lesakhelo kunye nemakrofoni. Kukho ukhetho lokurekhoda ividiyo kwiwebhusayithi uqobo kwaye uyigcine njengeWebM okanye iMKV.
Uvavanyo lwekhamera yewebhu (simahla): Iwebhu
4. Ikhamera yeWindows
IWindows ngokwayo inikezela ngenkqubo ye-webcam yenkqubo yemveli. Iwindows Camera yindlela elula kodwa esebenzayo, ngakumbi kwabo bafuna imisebenzi esisiseko kuphela. Ngokusebenzisa imowudi yoBuchule kuseto, unokuhlengahlengisa ibhalansi emhlophe kunye nokuqaqamba.
Ukuhlala uhlala kwisakhelo, usetyenziso luneemodeli zegridi. Kukho ukhetho lokutshintsha umgangatho wevidiyo phakathi kwe-360p kunye ne-HD epheleleyo kunye nobuninzi, kodwa uhlala ukwi-FPS ezingama-30. Iziphumo zigcinwa kwiJPEG nakwiMP4.
Ikhamera yeWindows (simahla): Windows 10
5. Into yokudlala yeWebcam
IWebcam yeWebhu sisicelo esilula kwi-intanethi kuye nakubani na okhangela amacebo okucoca ulonwabo ukuthatha imifanekiso ngekhamera yewebhu. Yiya nje kwiwebhusayithi kwaye ucofe Ulungele? Ncuma!. Ukuba isikhangeli sivimba ukufikelela, nika imvume yokusebenzisa ikhamera yePC.
Emva koko ucofe iqhosha eqhelekileyo ukulayisha zonke iziphumo ezikhoyo. Zininzi izinto onokukhetha kuzo, kubandakanya i-kaleidoscope, isitayile somoya, umsi, imuvi yakudala, ikhathuni nokunye okuninzi. Khetha into oyithandayo uze uye kwikhamera yekhamera ukuze ubhalise.
Isiphumo sinokugcinwa kwi-PC okanye sabelane ngokulula kwi-Twitter, kwiifoto zikaGoogle okanye kwiTumblr.
Into yokudlala yeWebcam (simahla): Iwebhu
6. I-OBS Studio
Ingaphezulu kwenkqubo ye-webcam, i-OBS Studio yaziwa ngokungqinelana nazo zonke iinkonzo eziphambili zokusasaza ividiyo. Phakathi kwazo, iTwitch, iMidlalo yeFacebook kunye neYouTube.
Kodwa kunjalo ikwavumela ukuba urekhode umfanekiso wekhamera yakho kwaye ugcine umxholo kwiMKV, MP4, TS kunye neFLV. Isisombululo sinokuvela kwi-240p ukuya kwi-1080p.
Isicelo sinezixhobo zokuhlela ezininzi ezikwaziyo ukwenza ukuba izinto zakho zibonakale zinobuchule. Phakathi kwazo ziimpawu zokulungiswa kombala, imvelaphi eluhlaza, ukuxutywa kwesiteshi somsindo, ukunciphisa ingxolo, nokunye okuninzi.
Isifundo se-OBS (simahla): Windows 10 kunye no-8 | MacOS 10.13 okanye ngaphezulu | Linux
I-GoPlay inokuba yinto elungileyo kubaqalayo, kodwa bafuna ukuphuma kwiziseko. Inkqubo ibonelela ngemisebenzi yokubhala kwiscreen, kunye nokufaka iifoto. Iividiyo zinokurekhodwa ukuya kuthi ga kwi-4K kwi-60fps kwaye zihlelwe kumhleli owakhelweyo.
Isicelo sikuvumela ukuba urekhode isikrini sakho sePC kwaye wenze iividiyo ezibukhoma. Inguqulelo yasimahla yesicelo ikuvumela ukuba urekhode iividiyo ezinemizuzu emi-2 kuphela, kunye newatermark. Iziphumo zingagcinwa kwi-MOV, AVI, MP4, FLV, GIF okanye kwisandi.
Yiya kudlala (simahla, inenguqulo epheleleyo ehlawulelweyo): Windows 10, 8 no-7
8. Apowersoft Free Screen Recorder Apowersoft
Apowersoft Free Online Screen Recorder ilungele abo bafuna ukurekhoda PC screen ngelixa ubukele webcam umfanekiso. Indawo inikezela ngezixhobo zokubhala simahla kwiscreen kwaye kubandakanya imilo. Yonke into ikwi-Intanethi, kodwa ngaphambi kokuba uqale, kufuneka ukhuphele ifayile ye isixhobo sokuqalisa akukho nanye iPC.
Iziphumo zinokugcinwa kwikhompyuter yakho njengevidiyo okanye i-GIF, egcinwe efini, okanye ekwabelwana ngokulula ngayo kwiYouTube nakwiVimeo. Isisombululo sinokusetwa njengezantsi, phakathi okanye phezulu.
Apowersoft Free Online Irekhoda (simahla): Iwebhu
Sebenzisa ifowuni yakho njengekhamera yewebhu yePC ngokusebenzisa iWi-Fi okanye intambo ye-USB
Izicelo zokurekhoda isikrini sakho sePC simahla
Usetyenziso lwee-spy eziluncedo